Famokarana nomerika sy teknolojia vaovao hamolavolana vokatra | Famoronana an-tserasera
Paul gondar | | Inspiration, maro
Famokarana nomerika sy teknolojia vaovao hamolavolana vokatra karazana rehetra. Ny rafitra famokarana dia nivoatra nanolotra mpamorona fahafaha-manao vaovao amin'ny vokatra fanamboarana. Teknolojia toa Fanontana 3D tsy maintsy mahazo injeniera, mpanakanto, mpamorona ary mpamorona karazan-jaza rehetra mamorona tolo-kevitra ara-batana amin'ny fotoana firaketana sy amin'ny vidiny ambany dia ambany tsy mila mandalo ny indostria mba hamokarana prototypes.
Ny fiovana eo amin'izao tontolo izao, ny fandrosoan'ny teknolojia ary ny fahaiza-mamorona dia manatevin-daharana an'ity dingana ity mba hanomezana vokatra tsy manam-paharoa ho an'ny mpamorona sy mpampiasa izay maniry ny vokatra aterak'ity karazana teknolojia ity.
1 Teknolojia fanontana 3D
2 Inona no mety ananan'ny fanontana 3D?
3 Inona avy no ilana ny famoronana nomerika raha mpamorona vokatra aho?
4 Maitso ve ny famokarana dizitaly?
5 Ny herin'ny rano
6 Fanapahana laser
7 Elena Corchero: ny mpamorona manokana amin'ny famoronana nomerika
Teknolojia fanontana 3D
La Fanontana 3D nahavita namorona a rafitra fanamboarana nomerika vaovao tena manintona ho an'ny matihanina sy ho an'ny mpampiasa mahita olon-tsy fantatra amin'ity teknolojia ity. Ity rafitra fanamboarana nomerika ity mampiasa filamenta plastika toy ny fitaovana fanontana. Miorina amin'ny a teknolojia fanaraha-maso isa, Tratra ny fanontana 3D adikao angona isa ho lasa mihetsika fanatontosana amin'ity fomba ity mamorona endrika ara-batana amin'ny lafiny telo.
Inona no mety ananan'ny fanontana 3D?
Amin'ny fomba fijery ara-teknolojia ny mety an'ity rafitra fanontana ity dia hita amin'ny sehatra maroavy amin'ny fanafody ny construction afaka jerentsika ny fomba ampiasain'ny sehatra ivelan'ny famolavolana sy ny kanto an'ity rafitra ity fitaovana fanavaozana. Afaka mahita 3D pirinty eo amin'ny sehatry ny fitsaboana amin'ny tetikasa mahaliana toy ny fampiharana ny sela miafina amin'ny alàlan'ity rafitra fanontana ity ho an'ny famoronana taova olombelona.
Raha tianao ny sakafo dia ho liana ianao hahafantatra fa misy izany sakafo noforonina tamin'ny fanaovana pirinty 3D.
Inona avy no ilana ny famoronana nomerika raha mpamorona vokatra aho?
La fanamboarana nomerikananokatra izy tontolon'ny mety ho an'ny mpamorona indostrialy sy vokatra satria manolotra ny mety hisian'ny mamorona prototypes amin'ny vidiny mirary tokoa fisorohana ny fizotran'ny fizotry ny indostrialy. Raha mpamorona vokatra ianao dia afaka manao izany mamolavola fanaka amin'ny 3D ary manamboatra azy na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao, ity dia tsy isalasalana fa fandrosoana eo amin'ny sehatry ny logistika, toekarena ary ny tontolo iainana, noho ny famokarana dizitaly dia afaka manana ireo fanaka tianao izay haingana sy mora kokoa ianao. Androany amin'ny Internet dia afaka mahita pejy marobe azonao atolotra ianao fanaka maimaim-poana amboarina amin'ny alàlan'ireo rafitra fanamboarana ireo.
Maitso ve ny famokarana dizitaly?
Manamboatra izany ny fanamboarana nomerika vokatra namboarina na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao azo atao ny manamboatra nefa tsy mila karazana fitaterana na fandaniana azo avy amin'ity dingana ity. Mivezivezy tontolo iainana fahombiazana lehibe ny famokarana dizitaly. Ity rafitra fanamboarana nomerika vaovao ityManohitra ny fahazaran-dratsy efa nomanina miady amin'ny hevitra fanariana zavatra rehefa very ny iray amin'ireo sombiny. Amin'ny alàlan'ny modeling 3D dia azo atao izany mamolavola ampahany simba amin'ny zavatra iray ary soloina ka manome fiainana vaovao azy.
Ny herin'ny rano
Mino izany ve ianao jet rano afaka manapaka vy? Minoa izany satria vitanao izany ary tena mora be. Misy karazana milina fanaraha-maso isa antsoina hoe "jet jet" inona no tapaka manomboka amin'ny vy ka hatramin'ny vato tsy misy olana. Momba izany ny teknolojia mitovy amin'ny fanontana 3D fa raha tokony hanana rafitra manampy fitaovana, izay ananana dia rano mahery.
Tsaroantsika rehetra ny zava-niseho tamin'ny ady kintana rehefa nanapaka varavarana tamin'ny sabatra laser-ny Jedi nefa tsy nisy fahasarotana, na dia toa adala aza izany dia azo atao ny misaotra ny milina fanapahana laser. Ity karazana haitao ity dia mitovy amin'ny 3D fa mampiasa laser amin'ny fanapahana karazana fitaovana rehetra miankina amin'ny heriny. Eny an-tsena dia afaka mahita vokatra maro vita amin'ity rafitra fanapahana ity isika ny tena manintona azy dia ny fahataparany, may ny sisin'ny ala, ka mahatratrarana antso avo.
Elena Corchero: ny mpamorona manokana amin'ny famoronana nomerika
Any amin'ny tontolon'ny fanavaozana amin'ny famokarana nomerika afaka mahita mpamorona mahaliana be toy ny tranga misy isika Elena Corchero placeholder image. Mpamorona ity mampiasa rafi-pamokarana maoderina mamorona vokatra lamaody.
La fanamboarana nomerika mampiseho antsika a mampanantena atsy ho atsy izay ifandraisan'ny teknolojia, ny famolavolana ary ny fanavaozana, mitantana ny manolotra an'izao tontolo izao ny karazana safidy vaovao amin'ny fanamboarana vokatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Famokarana nomerika sy teknolojia vaovao hamolavolana vokatra
Fitaovana an-tserasera lehibe hanaovana Pixel Art